ekiri 5: ozi niile ị nwere ike ịnụ ụtọ n'oge na-adịghị anya na Apple Watch | Akụkọ akụrụngwa
watchOS 5: ozi niile ị nwere ike ịnụ ụtọ n’oge na-adịghị anya na Apple Watch gị
Apple Watch ga-abụ ngwa ọrụ dịwanye mma na nwelite ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ ya. watchOS 5 abịarute na-eji ihe ọhụrụ na ha ga-eme Apple smartwatch ghọrọ eze zuru oke nke ngalaba ahụ.
N'ime ọrụ ọhụụ pụtara ìhè nke watchOS 5 anyị nwere ike ịchọta nnabata akpaghị aka nke omume mmega ma ọ bụrụ na ịgaghị iji aka rụọ ọrụ; ịrụ ọrụ iji malite mkparịta ụka site na ozi olu; nakwa inwe ike ịdekọ ihe ndị asọmpi anyị na-eme na ọkwa kwa ụbọchị. Mana ka anyi hu n'uju ihe nwelite ozo nke Apple Watch nyere anyi na priori ga-abata na Septemba na-abịa.
1 watchOS 5 na-eweta ọrụ Walkie-talkie na nsogbu ndị otu
2 Akpaghị aka ebighị nke ọzụzụ mode na ọhụrụ egwuregwu na-agbakwunye na ndepụta
3 Apple anaghị echefu Siri na watchOS 5 na «Podcast» rutere Apple Watch
4 Apple na ndị LGBTQ
watchOS 5 na-eweta ọrụ Walkie-talkie na nsogbu ndị otu
Na mbu, Apple Watch ga-aghọ Walkie-talkie; na ndị ọzọ okwu, a ọhụrụ push-na-ntọhapụ ọrụ na-agbakwunyere na-enwe ike inwe olu mkparịta ụka na-enweghị na-eji iPhone. Anyị ga-ahọrọ kọntaktị ma anyị ga-enwe ike ịme ka ọrụ a rụọ ọrụ. Enwere ike iji ya na netwọkụ WiFi na netwọkụ mkpanaka.
N'aka nke ozo anyi g'enwe ohere mepụta nsogbu, tinye ndị enyi anyị ma hụ onye n’ime gị imecha ya tupu na ihe na-enwe ọganihu. Ọzọkwa, iji mee asọmpi a ka sie ike, ị ga-enweta ọkwa.
Akpaghị aka ebighị nke ọzụzụ mode na ọhụrụ egwuregwu na-agbakwunye na ndepụta
Mana na watchOS 5 anyị ga-enwekwu ndozi. Banyere mmega ahụ, dịka anyị kwurula na mbido isiokwu a, agbakwunyere na Apple Watch na-akpaghị aka na onye ọrụ amalitela ọzụzụ - nke a ọ bụrụ na ị naghị eji aka gị eme ya. Mgbe agbakwunyere abụọ ọzọ na ndepụta nke egwuregwu: Yoga na njem.
Apple anaghị echefu Siri na watchOS 5 na «Podcast» rutere Apple Watch
Siri anọwo na ugbu na ndozi nke sistemụ nke na-ewu ewu smartwatch. Na nke a ị gaghị enwe ike ịkpọku onye enyemaka na-akwado ya na-akpọ ya dị ka ọ dị na mbụ; Ozugbo ị weliri nkwojiaka gị, Siri ga-adị njikere maka arịrịọ gị. Anyị ga-enwekwa la ngwa Podcast na Apple Watch; Anyị ga-enwe amamọkwa mmekọrịta nwere ike ịme omume na-enweghị ịbanye ngwa na ọrụ, yana ịnwe ntakịrị nyocha nke ibe weebụ sitere na njikọ anyị natara na nkwojiaka anyị - kpachara anya, ọ bụghị ihe nchọgharị iji na obere na obere ngebichi.
Apple na ndị LGBTQ
N'ikpeazụ, Apple guzoro na ndị LGBTQ. Na ncheta izu nganga, ọ na - ebupụta eriri ọhụrụ yana ọkọlọtọ LGBTQ dị ka onye protagonist yana akara ọhụụ. WatchOS 5 ga-adịrị ndị ọrụ niile na Septemba na-abịa. Na ụdị ndị dakọtara na mmelite a ga-abụ: Apple Watch Series 1, Apple Watch Series 2, na Apple Watch Series 3.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » watchOS 5: ozi niile ị nwere ike ịnụ ụtọ n’oge na-adịghị anya na Apple Watch gị
Ihe omuma ohuru nke iOS 12 nke Apple gosiputara n’oge WWDC18